iPhone ka Mac Atụmatụ Center - Atụmatụ & Aghụghọ maka Nyefee faịlụ n'etiti iPhone na Mac
iPhone ka Mac Atụmatụ Center - Nyefee faịlụ site iPhone ka Mac Ike-adị mfe
Ebe a bụ ihe: ndị mmadụ, ka m na gị, n'anya na-eji iPhone na Mac, Otú ọ dị, mgbe ọ bụ n'ezie ike ka anyị na-nyefee faịlụ n'etiti iPhone na Mac, karịsịa idetuo faịlụ site na iPhone ka Mac ebe iTunes awade otu ụzọ na-mmekọrịta ( si Mac ka iPhone NANI). Nke a bụ ihe mere a iPhone ka Mac Atụmatụ Center e wuru. Atụmatụ na usoro maka ebufe faịlụ n'etiti iPhone na Mac-gbakọtara ebe a, àjà ị nile di iche iche nke ngwọta aka faịlụ ebufe n'etiti ha mfe.
Nyefee Music n'etiti iPhone na Mac
-Achọ azịza maka otú nyefee songs si iPhone ọhụrụ Mac, otú nyefee songs si iPhone ka iMac, otú mmekọrịta music si Mac ka iPhone enweghị ikpochapụ iPhone? Gụọ otú nyefee music si iPhone ka Mac na site na Mac ka iPhone >>
Photos ogide ukwuu ohere nke gị iPhone, na-ahapụ dịghị ụlọ maka mmezi videos na songs? Gbalịa dezie iPhone gbara foto na iPhoto, ịkpa ákwà ha n'ime a pụtara ngosi mmịfe? Agbanyeghị, mbụ, nyefee foto gị iPhone gị Mac >>
Copy Videos n'etiti iPhone na Mac
Na-eji iPhone idekọ ụfọdụ videos buo gị Edebewo oge? Ọ bụ oge na mbubata videos si gị iPhone ka Mac ugbu a, ma n'ihi na mma ichebe ma ọ bụ n'ihu edezi. Nwere ụfọdụ nsogbu nke syncing vidiyo si na Mac ka iPhone na obi ụtọ? Ok, dozie ya. Ele otú nyefee vidiyo si na iPhone ka Mac ma tinye videos ka iPhone on Mac >>
Nyefee na Ndi ana-akpo n'etiti iPhone na Mac
Ọ bụ a nro ida kọntaktị. Anyị nwere ike ndụ n'enweghị songs na vidiyo na anyị iPhone, ma anyị nwere ike imeli ida kọntaktị. Ekwentị na-eji na-ekwurịta okwu na ndị mmadụ, olee otú i nwere ike ime na-enweghị kọntaktị? Iji zere adịkwa kọntaktị, ịmụta otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka Mac maka nkwado ndabere na mpaghara otú tinye kọntaktị na iPhone on Mac >>
Kasị nke faịlụ gị mkpa na-na kọmputa gị, nri? Ok, mgbe na ihe iPhone, mgbe ihe ị na-kwesŽrŽ ime bụ mmekọrịta gị iPhone na Mac, nri? Site n'ime nke a, kọntaktị, songs, videos, akwụkwọ, ngwa, na ndị ọzọ ga-eziga gị iPhone na iPhone zụrụ ihe na-depụtaghachiri gị Mac. Ịmụta isi ihe, otú mmekọrịta iPhone na Mac >>
Ịchekwa maka a ezo ụbọchị ọ bụghị ihe ọjọọ, ọ bụ? Onye maara ihe na-aga ime gburugburu akụkụ, nri? Nke ahụ bụ ihe mere anyị kwesịrị ndabere iPhone data ka Mac mgbe nile. Ma, mgbe anyị na-ejighi data on iPhone, anyị nwere ike inwe ha azụ ọzọ. Ele otú ndabere iPhone ka Mac >>
Ịgbanwee Android ka iPhone na 1 Pịa
Nyefee ngwa site iPhone ka Computer
Nyefee Music n'etiti iPhone na PC
Nyefee SMS si iPhone ka PC
Bugharịa Ndi ana-akpo si iPhone ka PC
Back Up iPhone ka PC na-enweghị iTunes
Top 17 Best ngwa ọdịnala n'ihi iPhone
Idozi Broken iPhone
Mụta Top 8 Yosemite Zoro Ezo Atụmatụ Ịbụ Mac geek
> Resource> Mac> iPhone ka Mac Atụmatụ Center